Ho an'ny santionany, ny fotoana fitarihana dia eo amin'ny 7 andro. Ho an'ny famokarana faobe dia 20-30 andro aorian'ny nahazoana ny fandoavam-bola. Manjary mandaitra ny vanim-potoana rehefa nahazo ny tahirim-bolanao ary manana ny fankatoavanao farany ny vokatrao. Raha toa ka tsy mandeha amin'ny fe-potoana voatondro ireo loham-pianaranay dia midira fotsiny ny zavatra takinao amin'ny varotrao. Amin'ny toe-javatra rehetra dia hiezaka hanome ny zavatra ilainao izahay. Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia afaka manao izany isika.
Azonao atao ny mandray ny fandoavam-bola amin'ny kaonty banky, Western Union, PayPal, TT na LC